शक्तिका ‘दाहिना’ परेका खतिवडा, यस्तो छ निरन्तर नियुक्तीको श्रृंखला समाचार-रिपाेर्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विदा भए लगत्तै राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंकबाट विदा भए लगत्तै पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग । त्यसपछिका श्रृंखलाबद्ध अनि अनौठा र अपत्यारिला नियुक्ती ।
राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएको केहि दिनमै अर्थमन्त्री । अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिएको भोलीपल्टै पुनः अर्थमन्त्री । अर्थमन्त्रीको फेरि कार्यकाल सकिएको भोलीपल्टै सरकारको विशेष अर्थ सल्लाहकार । त्यो पनि मन्त्रि सरहको सुविधासहित ।
मन्त्रि सरहको सुविधासहित अर्थ सल्लाहकार भइरहेका डा. युवराज खतिवडाले पुनः अर्को नियुक्ती पाएका छन् । सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा रहेका उनलाई अमेरिकाको लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ती पाएका खतिवडा आन्दोलनपश्चात फेरिएको व्यवस्थामा पनि निरन्तर नियुक्ती पाईरहेका छन् । फेरिएको व्यवस्थाभित्र पनि उनी निरन्तर एकपछि अर्को उच्च स्तरको नियुक्तीमा छन् ।
वि.सं. २०५८ देखि सुरु भएको नियुक्तीको श्रृखंला अलि अपत्यारिलो अनि अनौठो छ ।
एकपछि अर्को नियुक्तीको श्रृखंला यस्तो
राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य : डा. युवराज खतिवडा २०५८ मा राष्ट्र बैंकको जागिरबाट स्वतः अवकाश भएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट स्वतः अवकास भएका उनलाई त्यस लगत्तै २०५८ मै तत्कालिन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रुपमा नियुक्ती दिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति हातमा लिएर निरंकुशताको अभ्यास गरिरहेको बेला खतिवडालाई भने योजना आयोगमा नियुक्ती मिलेको थियो ।
युनएनडिपीको अर्थविद् : योजना आयोगमा ५ वर्षे कार्यकाल सकिए लगत्तै खतिवडालाई अर्को नियुक्तीको ‘अफर’ आइलाग्यो । खतिवडाले २०६२ मा तीन वर्षको लागि युएनडिपीको क्षेत्रीय केन्द्र, कोलम्बोमा वरिष्ठ अर्थविद्का रुपमा नियुक्ती पाएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष : युएनडिपीको तीन वर्षे कार्यकाल सकेर नेपाल फर्किएका खतिवडा फेरिएको व्यवस्थामा पनि खाली बस्नु परेन । उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ती गराएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ती पाएका उनी फेरिएको व्यवस्थापश्चात भने आयोगको उपाध्यक्षमै नियुक्ती पाएका थिए । नेपाल नेतृत्वको सरकारले उनलाई २०६६ असारदेखि नियुक्ती दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको गर्भनर : राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ती पाएको ९ महिना नबित्दै तत्कालिन सरकारले फेरि खतिवडालाई अर्को रहर लाग्दो नियुक्ती दियो । उनलाई २०६६ को चैत ९ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ती दिइएको थियो । खतिवडा गर्भनरबाट ५ वर्षे कार्यकाल सकेर २०७१ फागुन २५ मा राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष : २०७१ को फागुनमा गर्भनरबाट बिदा भएका उनलाई हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुनः दोहोर्याएर ल्याए । ओलीले २०७२ कात्तिक १७ मा खतिवडालाई योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा नियुक्ती दिएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य : राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ३ वर्षे कार्यकाल सकाएर बिदा भएका खतिवडालाई पुनः हालका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ती गराए । खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७४ फागुन ८ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री : विज्ञका रुपमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका खतिवडा ओलीका अत्यन्तै विश्वास पात्रका रुपमा देखिए । उनलाई ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अर्थमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी दिए । २०७४ को फागुन १४ देखि ओली सरकारले अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडालाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
पुनः अर्थमन्त्री : गोलाप्रथाबाट राष्ट्रिय सभामा २ वर्षे कार्यकाल पाएका खतिवडाको २०७६ को फागुन २० देखि स्वतः राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधी सकिएको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पदावधि सकिएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि स्वत: सकियो । तर, कार्यकाल सकिएको भोलीपल्ट नै उनलाई ओली सरकारले ६ महिनाको लागि पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्ती गरेको थियो ।
विशेष अर्थ सल्लाहकार : संवैधानिक व्यवस्थाका कारण खतिवडाको ६ महिने कार्यकाल गत भदौ १९ देखि स्वतः सकियो । खतिवडाले भदौ १९ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, राजीनामा दिएको १० दिनमा नै अर्थात् भदौ २९ मा नै उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री सरहकै सुविधा पाउने गरी सरकारको विशेष अर्थ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ती गरेका थिए ।
अमेरिकाका लागि राजदूत : अर्थ सल्लाहकारको भूमिकामै रहेका बेला सरकारले उनलाई अमेरिकाको लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर…